Tsy hita be ihany ny tontolo politika. Mbola banga ny toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena. Tahotry ny mpitondra? Arirarira tsy avoaka ny didim-panjakana fampiharana lalàna mifehy ny mpanohitra. Izay mihetsika na midina an-dalambe, darohana amin’ny herim-pamoretana.
Tsy hita be ihany izay hoe taon’ny asa amin’izao: mbola mila fanadihadiana ny fanovana na fanamboarana ny governemanta. Fanitsiana ara-drafitra? Tsy niomanana mialoha tsinona izay fomba hampiasana ny trosa avy any ivelany hoe mba tena hitondra fampandrosoana ho amin’ny fiainam-bahoaka.
Tsy hita be ihany izay fampihavanam-pirenena. Ny lalàna momba izany aza, tsy mampihavana. Maro ireo raharaha tsy hita be ihany… Amin’izany, mihamitombo sy mihalalina ny fahasahiranam-bahoaka: fidangan’ny vidim-pianana, tsy fandrimpahalemana, delestazy, haintany…
Mbola misy fanjakana sy mpitondra ve eto?